RW Somalia oo 30-kun ku wareejiyay guddiga abaaraha (Daawo)
March 11, 2017 - Written by Puntland Fox
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa guddiga abaaraha ku wareejiyay lacag loogu talagalay qoyska Madaxweynaha, taasi oo uu Madaxweynuhu u gartay in la gaarsiiyo dadka ay abaartu ku saameysay gobollada dalka.
Ra’iisul Wasaarha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo ka qeybgalay barnaamijka Gurmad Walaal ee ka baxa Warbaahinta Qaranka ayaa faah faahin ka bixiyay qaabka ay lacagtan ku timid.
Ra’iisul wasaaraha ayaa barnaamijka ka dhex sheegay in dowladda Turkiga ay ku deeqday daawooyin loogu talagalay dadka uu soo ritay cudurka shuban biyoodka ee ku dhibaateysan qaar ka mid ah gobollada dalka.
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa soo jeediyay in la joojiyo xafladaha la qabanayo inta ay jirto abaarta, laguna badalo kuwa dadka loogu gurmanayo oo si wada jir ah looga qeyb qaato abaarta.
Ra’iisul wasaaraha ayaa xusay in ka badan nus shacabka Soomaaliyeed ay soo asiibtay abaar aad u daran oo sababtay in meelaha qaar ay macluul ka dhalato, isla markaana hay’adaha samafalka ay kala hadleen in sida ugu dhaqsiyaha badan dadka loogu gurmado oo aan waqti kale la sugi karin.
Ra’iisul Wasaaraha waxa uu tilmaamay in ay la xanuunsanayaan kuwa ku dhibaateysan gudaha dalka, waxaana uu intaa ku daray in sida ay shacabka isugu gurmadaan ay noqon doono mid taariikhda gasha, shacabkuna looga baahanyahay inay dhexdooda isu gurmadaan.